‘सुसाईड प्रिभेन्सन’ को विमोचन – BFM 91.2
February 6, 2020 February 6, 2020 Bfm	0 Comments
विराटनगर, २३ माघ । न्यूरो हस्पिटल विराटनगरका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. रञ्जन थापाद्धारा लिखित आत्महत्या रोकथाममा आधारित पुस्तक ‘सुसाईड प्रिभेन्सन’ को आज विमोचन गरिएको छ ।
न्युरो हस्पिटल विराटनगरमा कार्यरत चिकित्सक थापाद्वारा लिखित सो पुस्तक आज अस्पतालको सभाकक्षमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच बिमोचित गरिएको हो ।
हस्पिटलकाका विशेषज्ञ चिकित्सक, कर्मचारी लगायतको उपस्थिती रहेको कार्यक्रममा हस्पिटलका संस्थापक तथा वरिष्ठ न्युरोलोजिष्ट डा. वीरेन्द्रकुमार विष्टले ‘सुसाईड प्रिभेन्सन’को विमोचन गर्नुभयो । विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै संस्थापक विष्टले यस पुस्तकले समाजमा दिनानुदिन बढीरहेको आत्महत्या रोकथाममा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयोे ।
पुस्तकका लेखक एवम वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. रञ्जन थापाले आत्महत्याका कारण नेपालमा दैनिक १५ जना मानिसको मृत्यु हुने र विश्वमा हरेक वर्ष १० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा रोकथामको प्रयास नहुने गरेको बताउनुभयो ।
← झोराहाटमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
६० मेघाहट बिद्युत उत्पादन गर्दै ६ पालिका →
जंगलमा मृत्त भेटिएकी युवतीको पहिचान भएन